Wrinkle-Free Suit Roll-elu | Martech Zone
Wrinkle-Free Suit Roll-elu
Wenezdee, Machị 5, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Lee, m nọdụrụ na ime ụlọ nkwari akụ na Milwaukee, Wisconsin. Ndị otu anyị na-egosi ụlọ ọrụ ebe a echi wee laghachi Indianapolis. Azụrụ m uwe ọhụrụ maka njem ahụ - ọ na-ere ihe dịka 70% kwụsịrị ma enweghị m ike ịgafe ya. Ọ bụ aja aja chocolate - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oji - ma nwee ezigbo ntụsara ahụ. M zụta a uwe na ezi a afọ ole na ole otú ahụ ka m si mesoo onwe m ihe dum ekike - gụnyere ileghara-on akpụkpọ ụkwụ.
N'ọdụ ụgbọ elu Midway, mụ na onye njem ọzọ malitere ịkparịta ụka, m wee kwuo na akpati m juru n'ọnụ m na-ebu. Nwoke ahụ ekwetaghị na m nwere kootu n’akpa m.
N'ezie, enwere m njem m niile na Akpa ozi - mgbanwe uwe, laptọọpụ, akwụkwọ akụkọ, wdg. Ma - ha na-amị amị n'ihi na m nwere ike ime ya site na nchekwa ngwa ngwa. Na Ikpe Logic Messenger akpa Enwere m oghere dị n'azụ nke MacBookPro m dabara n'ụzọ zuru oke, yabụ achọghị m ịkpaghasị ngwugwu m iji nweta laptọọpụ ahụ!
Mgbe m bi na Denver, elere m otu ihe ngosi ụtụtụ ebe otu nwa okorobịa gosipụtara etu esi apịakọta uwe ka o wee ghara inwe afụkọ. Ndị folks na-ebutekarị nnukwu akpa akwa ma ọ bụ na-apịa ya. Nsogbu ya bụ na akpa uwe ahụ na-apịaji, ịpịa ya na-akpata nhịkọ. Ọ bụrụ na ị tụgharịa uwe ahụ n'ụzọ ziri ezi, ị ga-ebili na enweghị nhịkọ ma ọlị ma ị nwere ike itinye ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla.
Abụ m nnukwu mmadụ - yabụ ị nwere ike iche n'echiche ole ohere uwe kwesịrị nara m.
Nyefee Uwe ọkpa gị
Iji kpoo uwe ogologo ọkpa gị, jide n'aka na a na-etinye uwe ogologo ọkpa ahụ na uwe ogologo ọkpa ha n'akụkụ ya na ihe ndị o kere eke mere ka ọ bụrụ na uwe ogologo ọkpa ahụ dị larịị. Na-amalite n’úkwù, tụgharịa ọkpa ahụ nke ọma ruo mgbe ha nọ n’otu mpịakọta mara mma. Dina ha n'ime akpa gị ma ọ bụ n'akpa gị n'akụkụ dị nro ebe ha na-agaghị asacha.
Nyefee jaket gị
Rolling jaket gị na-ewe obere ihe. You'll ga - achọ iji nwayọ ehulata, ọbụghị ịdaji :), jaketị gị ka ị weghachite ubu iji metụ onwe ha aka. Wayzọ a, ihe ọ bụla n'ogige atụrụ pụtara kpọmkwem n'etiti etiti na-ele anya nkịtị. Jiri nwayọ debe aka uwe otu akụkụ nke jaketị. Chọghi igbasa ha dika icho ha. Ọgwụgwụ nke aka uwe kwesịrị ikuku elu n'okpuru ala bọtịnụ na jaket.
Malite n’ubu, tụgharịa jaket ahụ elu - mana gbaa mbọ hụ na ị ghara ịhịkọ ya ka ị na-aga. Ọ ga-etolite karịa mpịakọta karịa uwe ogologo ọkpa gị, mana ọ ga-adị mma na njem ahụ! Etinyekwala ihe n’ime akpa gbara ya gburugburu, sọọsọ ya n’ebe ahụ sọks, okpu, wdg.
Ikpughe uwe gị
Ozugbo ị ruru ebe ị na-aga, gbaa mbọ tọpụ akpa ahụ, tọpu akpa ahụ, kwụwa ya. Kwesịrị ịchọta ya n'ọnọdụ zuru oke! Ndo na enweghị m foto iji kwado - M n'ezie nọ n'okporo ụzọ ya igwefoto ekwentị anaghị egbutu ya.
IHE: O yighị ka m nwere nnukwu ihu ọma na uwe ejiji - M na-agakarị ironing ha na họtel.
Tags: erik qualmanọchịmobile ngwamobile enyi na enyinjikarịcha ekwentịsaịtị mkpanaakaparodyàmàọkachamaramgbanwe mgbasa ozi mmekọrịta
Chekwa otu ego iji mefuo dollar
Mmụta Ọ̀ Bụ Azịza Ya?
Mar 6, 2008 na 11: 43 AM
Echefu ndụmọdụ ndị ahụ banyere ịde blọgụ ka mma ma ọ bụ wijetị dị iche iche maka ngwa WordPress, nke a bụ ihe ọmụma bara uru n'ezie! 🙂
Mar 6, 2008 na 1: 41 PM
Doug, Ahuru m ejiji na suut n'anya, nke gi bu jazzy, kedu ka odi? Enwetara m ọtụtụ ihe m, m bụ 6ft2in na 260 lbs. Nwoke oru gi kwesiri inwe ihe kariri 3 nke oma maka ahia, acha anụnụ anụnụ, uwe mkpuchi, isi awọ na oji, na akwa mkpuchi akwa maka ubochi oku gi.
Mar 7, 2008 na 6: 17 PM
M uto na uwe karịrị nnọọ mmefu ego m iji zụta ha, JD! Uwe a dịpụrụ adịpụ na-adịghị mma - yabụ achọrọ m iji ya banye ịkwa akwa. Aka uwe dị ihe dị ka sentimita asatọ n’ogologo, mana ihe ọ bụla dị mma. Achọrọ m ka slack ahụ nwee akwa silk, uwe m ọzọ nwere nke a ma ọ dị mma iyi karịa akwa jeans ochie.
Nchịkọta ọrụ na-arụ ọrụ! M kwere nkwa 🙂
Mar 7, 2008 na 5: 14 PM
Former bụbu onye agha, gị! Amụtara m mbukota a mgbe m na-anọghị na CA na-eleta ezigbo enyi m nke nọ ebe ahụ n'oge ahụ. Anọ m na-akwakọba akpa m ịla n'ụlọ ọ kpasuru ya iwe. Ọ weghaara ma kpoo uwe m niile ma mechaa daba n'ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ebe m weere. Echere m na ọ bụ ihe ndị agha b / c naanị ndị m maara na ngwungwu n'ụzọ a abụrụla ndị agha ma ọ bụ nwee mmetụta na ndụ ha.
Ka o sina dị, atụgharịrị m site na ịtụgharị ihe niile kemgbe. Ana m abịarute mgbe ọ bụla na-enweghị wrinkles (nke bụ nsogbu nke ndụ m) na ọtụtụ ohere maka ndị ọzọ. Uwe ejiji, agbanyeghị, ee, a ga-ejikarị ígwè metụta ya.
Ezigbo ozi, yana ozi bara ezigbo uru ịnweta dị ka onye ọchụnta ego.
Mar 7, 2008 na 6: 22 PM
Ọ ga-abụrịrị na m na-eme agadi… laa azụ n'ụbọchị m ọ bụ 'apị & stow' Anyị agbanyeghị ihe ọ bụla, mana enwere ihe dị na uwe anyị site na ịpị ha! M ka na-ehicha akwa nhicha ahụ dịka m mere na Boot Camp ma enweghị m ike ịkwado ha apịaji. Ọ dị mwute!
Mar 8, 2008 na 10: 08 PM
Gbalị ịpịgharị uwe ahụ ma hụ ma ọ dị ọfụma karịa akpa uwe m na-eji ugbu a. Ọzọ aghụghọ - na-Chiefs na ebe m na-enweghị ha na-ele ka m na-ehi ụra na ha. Ndụmọdụ ọ bụla maka nke ahụ, onye ọ bụla?
Jun 28, 2008 na 9: 42 PM
M na-azụta uwe na-enweghị ígwè site na njedebe ala ma tụgharịa ha. Ọ bụrụ na e nwere ahịhịa ma ọ bụ ntụpọ ndị ọzọ, otu swipe nke ígwè ahụ ezuola. Ọ bụrụ na m ma na m ga-eyi jaket, anaghị m emekpa ahụ ịkpụ. The creases pụta n'ime 30 nkeji ma ọ bụrụ na m na-yi a jaket uwe.
Jun 23, 2009 na 1:21 AM
ụzọ ọzọ - dọpụta otu ogwe aka nke jaketị n'ime, ma gaa n'ihu ka ị nwee otu ubu n'ime. Tinye ogwe aka nke ozo site n'ime aka. E kwesiri ichikota ubu. Mgbe ahụ kpoo jaket ahụ.
Brookmụnna Brooks wrinkle uwe elu bụ nke kachasị mma - ha enweghị afụkọ.